thinzar's blog: Tagged game pool ထဲ ပါခဲ့ရပြန်တယ်
26/4/07 2:51 AM
လုံခြုံနွေးထွေးမှု ့တွေ အပြည့်ပေးနိုင်တဲ့ ညာလက်မောင်း ခေါင်းအုံးစရာ ရရင်ကော ခေါင်းအုံး၂လုံး လိုဦးမှာလားဟင်။
26/4/07 4:19 AM
ဆေးထိုးအပ် ကြောက်တုန်းပဲဆိုတော့ ကလေးပေါ့ :D
27/4/07 10:28 PM
၁၀. ဒါဆိုကြက်သွန်မထည့်ဘဲ ဟင်းတွေချက်ရမှာပေါ့နော်. ဘယ်အချိန်ကစပြီး Onion Phobia ဝင်သွားရတာလဲ.
၉. Chocolate Phobia ဖြစ်ရမယ်. Valentine's Day ကျရင်တော့ ဘဲဘဲခမျာ ပိုက်ဆံမကုန်တော့ဘူးပေါ့ ကောင်း၏...
၈. ဒါကတော့ Peel Phobia ဖြစ်ရမယ်.
၇. ဒီတစ်ခါကျတော့ Couple Phobia ဗျ ဟဲဟဲ
၆.၅. အင်းဒါလေးလည်း မဆိုးပါဘူး. နားပူနားဆာလုပ်ခံရတာ မကြိုက်တဲ့သူဟာ သူများကိုလည်း နားပူနားဆာ လုပ်မယ်မထင်ဘူး. ဘဲဘဲ ကံကောင်းသွားပြန်ပြီ... နာလိုလိုက်တာဗျာ...
၄. တူလိုက်တာ. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ online မှာ ခဏခဏတွေ့ဖြစ်တာကိုး. ခုတော့ တို့သိပြီ..
၃. ဟုတ်တယ်. ဟုတ်တယ်. တစ်ခါတစ်လေကျရင် လိမ္မာတဲ့ ကလေးလေးပုံစံမျိုးလေးနဲ့ စကားနားထောင်ပြီးတော့ တစ်ခါတစ်လေကျရင်တော့ လူကြီးဂိုက်ဖမ်းနေတာ မပြီးတော့ဘူး.. Split Personality ရှိပုံရတယ်. ဟဲဟဲ ကြုံတုန်းလည်း ဝင်ဖဲ့လိုက်ဦးမယ်.
၂. Needle Phobia ကတော့ မိန်းကလေးတိုင်းကြောက်တတ်ကြပါတယ်. ဒါပေမယ့် မသဉ္ဇာလို အာဂမိန်းကလေးက ကြောက်တယ်ဆိုတော့ စိတ်ထဲမှာ မကောင်းဘူး. နေမကောင်းရင် ပြောနော်. ဟဲဟဲ
၁. ဆင်မယဉ်သာလေးလမ်းလျှောက်နေတာ မြင်လို့ခေါ်လိုက်ရင် သမင်လည်ပြန်လေး လှည့်ကြည့်မှာလားဟင်.
Phobia တွေများတယ်နော်. ဘာလို့လဲ. Anyway, ရေးလို့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အတွက် ကံကောင်းခြင်းများ ဆိုက်ရောက်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ် မသဉ္ဇာရေ...
28/4/07 3:36 PM
I've updated ThinZar
29/4/07 8:07 PM
ကိုကျော်မင်းထွန်း>> ဟမ်.. မကောင်းတဲ့ အချက်တွေ ရေးပါတယ်ဆို ကောင်းတယ်တဲ့.. :D
ကိုချို >> အဲဒါကတော့ အခြေအနေ အရ..
ကိုဖိုးချမ်း>> အဲလို ကလေးလို ကြောက်တာလဲ မဟုတ်ဘူး။ ဆေးနဲ့ ပါတ်သက်ရင် ဘာမှကို မကြိုက်တာ.. ဆရာဝန်က တစ်နေ့ ဆေးလေးကြိမ်သောက်ပါဆိုရင် နှစ်ကြိမ်ဘဲ သောက်တယ်။
ကိုရန်အောင်>> သူလုပ်မှ ပိုဆိုးနေပြီ.. phobia တွေ စုံစိနေတာဘဲ..
၉။ Valentine day မှာ ချောကလက်ပေးရမယ်လို့ ဘယ်သူများ သတ်မှတ်ခဲ့လဲ မသိပါဘူး။
၃။ သူများကို ဝင်ဖဲ့သွားသေးတယ်။ split personality တဲ့။ အခြေအနေအရ နေရတာပါ။ :D
၂။ needle phobia ကတော့…
၁။ သမင်လည်ပြန် လှည့်ကြည့်ရုံတင် မကဘူး။ ငါးခူပြုံးပါ ပြုံးပြလိုက်ဦးမှာ။
ကိုမျိုးကျော်ထွန်း>> thanks နော်..
အစားဂျီးမများလို့သာ တော်တော့တယ် မသဉ္စာရေ့.. ဂျီးသာများလို့ကတော့.. ဟင်းဟင်း.
ဟော.. ကြည့်.. နောက်တစ်ယောက်.. တကယ်ဂျီးမများပါဘူးဆို.. မယုံရင် မုန့်လိုက်ကျွေးကြည့်လေ.. :P